Iinwele ezi-8 ezidumileyo zonyaka | Amadoda aQinisekileyo
Ukuba ukope enye yazo, siyakuvuyela kukhetho lwakho oluhle. Kodwa, usenalo ixesha lokuba ubuze umchebi weenwele zakho kunyaka olandelayo. Sithetha ngeyona ndlela idumileyo yeenwele zango-2016.
I-undercut kunye necala lokwahlulahlula liphawule u-2016. Ngokwahlukileyo, iinwele zendalo eziqhayisa ngamaza kunye neenwele, zishiya inkululeko yokuhamba (phantse iyonke) kwizitshixo.
1 UJustin Theroux
2 ujustin bieber
3 UDaniel Grao
5 URalph Fiennes
6 uzayn Malik
7 UMateyu Healy
8 UJoe keery
Umntu waseMelika uhlala unyaka omnye njengomgangatho opholileyo. Uye wasiphefumlela sobabini ngeenwele zakhe (ngamanye amaxesha ezisesikweni kwaye abanye befunda ngokungathandekiyo) kwaye uhlala ekhetha ukukhetha ikhabethe.
Kuzo zonke iinwele azidlalileyo kulo nyaka, ngokuqinisekileyo sinamathela kuguqulelo lwakhe lwangaphantsi: ixesha elide kunye nentshukumo eninzi.
Lo ibingunyaka obalaseleyo kumdlali weqonga waseSpain uDaniel Grao, kwaye iinwele zakhe ngokuqinisekileyo bezilungiselelwe lo msebenzi. Ngamaxesha onke inemisonto ebunzi kunye nasemacaleni ubude obuphezulu. Umzekelo onokuwulandela kumadoda anobuso obude, nokuba une-wavy okanye iinwele ezithe tye (njengoko wayeyinxiba kwindawo yokuqala 'kaJuliet' eCannes).
Imvumi yayisungula ukwenziwa kobuso obutsha ukubhiyozela ukukhutshwa kwecwecwe lakhe elitsha, kwaye isiphumo sipholile njengoko unokulindela.
Indoda yesiNgesi iyakwazi ukugquma uMatthias Schoenaert omncinci kwaye onciphileyo kunconywayo (ngakumbi kwimpahla yakhe) 'Imfanyekiswe lilanga'. Inkuthazo yamadoda onke anamatikiti. Iinwele ezintle zinokubanomtsalane nazo, ngakumbi xa zinxitywe ngesidima kunye nesitayile.
UZayn waguqula le ndlela ingenasiphako yaba sisityalo esifutshane kakhulu saseFrance ehlotyeni, apho wacela iphephancwadi iDazed. Ubume be-oval ebusweni bakhe buvumela ukuba ahambe ukusuka kwelinye icala ukuya kwelinye ngaphandle kokuphulukana nesibheno.
Ixesha elide, i-wavy kwaye ngaphezulu kwako konke, yeyakho buqu. Inwele ekhokelayo yomculi we-1975 imele impefumlo emnandi yomoya omtsha ebusweni behomogeneity ekhoyo. Ukuba, njengaye, ufumanisa ukuba unakho ukuyila i-hairstyle yakho, ebonisa ubuntu bakho, icebiso lethu kukuba umngcipheko ufanelekile.
Ngalo mdlali we-'Stanger Things 'kunzima ukwazi ukuba uyazithanda iinwele zakhe okanye unomona kuphela ngentloko yeenwele zakhe. Ngayiphi na imeko, iinwele zamashumi asibhozo azinxibileyo kuthotho lweNetflix zimenza afanelwe yindawo phakathi kweenwele ezidumileyo, kuba yenye yezona nwele zikhunjulwayo zonyaka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Isitayile esinenwele » Ezona zinwele zidumileyo zango-2016
Izinto ozithandayo ezinesitayile kobu busika
Iindlela ezi-5 zokunxiba iihempe zekhola ze-mandarin